Intokazi edume ngezinkondlo | News24
Intokazi edume ngezinkondlo
isithombe: sithunyelweImbongi uNksz Snegugu Mgobozi.
INTATHELI yephephandaba iFever uNksz Nosipho Mkhize ixhumane nentokazi ebhala izinkondlo uNksz Snegugu Mgobozi ngenhloso yokwazi ngempilo nomsebenzi wakhe wokubhala izinkondlo. Baxoxisene kanje:
NM: UNgubani uSnegugu futhi wenzani?
SM: Igama nginguSnegugu Mgobozi owaziwa ngelika
Mbongikazi kamaVilakazi ohlala eMariannhill eZwelibomvu. Ngenza unyaka wesibili ezifundweni ze-Public Relations Management eNyuvesi yaseZululand futhi ngingumbhali wezinkondlo.
NM: Uqale nini kubhala izinkondlo?
SM: Ngiqale ukubhala izinkondlo ngesikhathi ngisafunda emabangeni aphansi esikoleni esise Mkhomazi okuthiwa iGoli Primary School.
Ngigqugquzeleke kakhulu ekubhaleni izikondlo ngesikhathi ngifunda eMargot Fonteyn Secondary School njengoba ngangenza izifundo ze-dramatic art.
SM: Njengoba izinkondlo zami zigqugquzela intsha ukuba isikume izimele kukona konke ekwenzayo, lokho sekwenze ngasungula uhlelo lokugqugquzela intsha nomphakathi esiteshini somsakazo iKwezi oludlala ku-90.5 noma ku-107.7 FM njalo ngolwesibili. Ngihlele nomcimbi ngomhla ka-30 kuNhlangulana (June) e-St Lukes Anglican Church, lapho kuzobe kuhlangene izihlwele zizolalela ngomsebenzi wami futhi ngizobe ngihlanganyele nabanye abenza umsebenzi ofana nowami.
SM: Ngisebenzisane noLungi Twinnie Dube wenhlangano i-Think Fresh Consulting emcimbini wama ciko ngonyaka ophelile.
Ngizosebenzisana naye futhi komunye umcimbi ohlelwe ngoMbasa (April).
Ngisebenzisana nenkampani yengqehu iMantsoe Creations ngiphinde ngisebenzisane ne-Binza Information Network ukuhlela umncintiswano wezimbongi ozoba ngomhla ka-26 kuNhlaba (May) lapho kuzobe kuqhudelana izimbongi ezihlukahlukene eThekwini namaphethelo.
SM: Eminyakeni emibili ezayo ngizibona ngisezingeni eliphakeme kakhulu kwezezinkondlo ngoba sengisungule nenkampani ebhekelela amaciko angakosabalali ngomsebenzi wawo ekuthiwa yi-African Rhythmic Voices Empowerment.
Le nhlangano ibuyise ithemba kulabo abanethalente kwezama ciko nokuthi ibalekelela ekutholeni izindawo lapho bengaveza khona umsebenzi wabo bangagcini sebephelelwe amandla ngoba benganakiwe.
Thina bantu abamnyama sike sithi kukhulumeka kangcono uma ingxoxo uyibhala phansi futhi baningi abalaphekayo emphefumulweni uma befunda noma belalele izinkondlo.
SM: Engingakusho kwintsha wukuthi sebenzisa ithalente lakho, sebenza kanzima isikhathi usenaso. Ziveze esixukwini ngoba akekho oyokumela ngaphandle kwakho uqobo.
NM: Uma umuntu ethanda ukwazi ngomsebenzi wakho, engawutholaphi?
SM: Umsebenzi wami uzotholakala maduze nje kucwecwe phecelezi-CD.
Uma ngabe uthanda ukungiqasha ngizonandisa emcimbini ungashayela inombolo ethi: 061 123 2629 noma ethi: 060 472 9280 noma uthumele umyalezo ngekheli le email elithi: snegugumghobozi@gmail.com